Thu, Apr 25, 2019 | 12:11:54 NST
वैशाख २३ – अमेरिकी अन्तरीक्ष निकाय (नासा) ले ‘इनसाईट’ नामक यानलाई शनिबार मंगल ग्रहमा प्रक्षेपण गरेको छ ।
दाङ, वैशाख – १६ – म्यागसेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुनले दाङको तुलसीपुरमा आविष्कार केन्द्र खोल्ने बताउनुभएको छ ।
नुवाकोट, वैशाख १४ –उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले ९ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आउँदो १० वर्षमा नेपालमै १० हजार मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्ने बताउनु भएको छ ।
काठमाडौं, चैत ३० – सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाइने भनी आएको हल्ला निराधार भएको प्रष्ट पारेको छ ।
एनसेलले ल्यायो यस्ताे डेटा प्याक, बोनसमा दैनिक १ घण्टाको निःशुल्क भिडियो स्ट्रिमिङ
काठमाडौं, चैत्र २८ – एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले ‘फ्यूलयोर फन’ योजनाअन्तर्गत आफ्ना ग्राहकका लागि ‘अल टाइम डेटा प्याक’लाई थप सुलभ बनाउँदै ‘सही’ डटा प्याक ल्याएको छ ।
नयाँ वर्षमा सामसङको ‘अफर बबाल’!
काठमाडौं, चैत २३ – नेपालको सर्वाधिक विक्री हुने स्मार्टफोन कम्पनी, सामसङले नयाँ वर्ष २०७५ लाई लक्षित गर्दै “२०७५ साल सामसङ अफर बबाल” अफर घोषणा गरेको छ ।
एकै पटक १३७२ रोबोटको ‘डान्स’, बन्यो ‘वर्ल्ड रेकर्ड’ (भिडियोसहित)
चैत १९ – इटलीको रोममा एक हजार ३ सय ७२ रोबोटले संगीतको धुनमा एकै पटक नाचेर गिनिज बुक अफ् वर्ल्ड रेकर्ड कायम गरेका छन् ।
चैत १८ – चीनले अन्तरिक्षमा पठाएको त्याङगङ–१ स्पेश स्टेशन दक्षिण प्रशान्त महासागरभन्दा माथि निश्क्रिय भएको छ ।
​एसईई परीक्षार्थीलाई एनसेलको ‘पहिलो सिम’ योजना
काठमाडौं, चैत १९ – एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले २०७४ सालको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरुका लागि विषेश अफर ‘पहिलो सिम’ल्याएको छ ।
​वायु प्रदुषणको जानकारी दिन ‘सफा हावा एप’ सार्वजनिक
काठमाडौं, चैत १५ – वायु प्रदुषणको जानकारी दिने ‘सफा हावा एप’ काठमाडौंमा एक कार्यक्रमकाबीच सार्वजनिक भएको छ ।
अब फोन गरेकै भरमा भात पाक्ने....
रुकुम (पश्चिम), चैत १० – मुसीकोट नगरपालिका–११, चलाक्चाका वसन्त ओली उमेरले २१ वर्ष पुग्नुभयो ।
​टेलिकमको अवरुद्ध मोबाइल सेवा सुरु
काठमाडौं, चैत ८ – बिहानैदेखि नेपाल टेलिकमको मोबाइल फोनमा देखिएको समस्या समाधान भएको छ ।
काठमाडौं, चैत ८ – नेपाल टेलिकमको मोबाइल फोनमा समस्या देखिएको छ ।
चैत ८ – क्याम्ब्रिज एनालिटिका स्क्यान्डल सार्वजनिक भएको पाँच दिनपछि फेसबुकका मालिक मार्क जुकरबर्गले मौनता तोडेका छन् ।
रोबोट सोफियाले भनिन् - भ्रष्टाचारकाे अन्त्य गर्न प्रविधिले सहयाेग गर्छ
चैत ७ – साउदी अरेबियाबाट नागरिकता प्राप्त गरेकी रोबोट सोफिया नेपाल आएकी छिन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले आयोजना गरेको ‘टेक्नोलोजी फर पब्लिक सर्भिसर डेभलपमेन्ट’ कन्फेरेन्समा सहभागी हुन सोफिया बुधबार नेपाल आएकी हुन् ।
काठमाडौं, चैत ६ – विश्वमै पहिलो पल्ट नागरिकता पाएकी रोबोट सोफिया नेपाल आउने भएकी छिन् ।
कतै फेसबुकमा तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी चोरिएको त छैन ?
चैत ६ – करोडौँ प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत जानकारी चोरी भएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै फेसबुकको शेयर ह्वात्तै घटेको छ ।
काठमाडौं, फागुन २९ – नेपालको सबैभन्दा विश्वासिलो इलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्ड सामसङले नेपाली बजारमा आफ्ना स्मार्टफोन ग्यालेक्सी एस नाइन र एस नाइन प्लस बजारमा ल्याउने भएको छ ।
​अमेजनले बनाएको स्पिकर आफै हाँसेपछि...
फागुन २५ – अमेजनको चर्चित होम स्पिकर इकोमा जडित आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सिस्टम(एआई) ले यसका प्रयोगकर्तालाई हैरान बनाएको छ ।
​ग्यालेक्सी नोट ८ किन्दा उपहार र सुविधाको बहार
काठमाडौं, फागुन २२ – सामसुङले ‘ग्यालेक्सी नोट ८’ को खरिदमा उपहारसहित विभिन्न सुविधाहरु उपलब्ध गराउने भएको छ ।
फागुन १८ – संसारका कतिपय स्थानमा फोरजी नेटवर्क पुगेको छैन तर वैज्ञानिकहरुले चन्द्रमामा फोरजी नेटवर्क पर्याउने महत्वकांक्षी योजना अघि बढाएका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय प्रविधि सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौँ, फागुन १७ – दश दिन लामो एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय प्रविधि सम्मेलन बुधबार सम्पन्न भएको छ ।
होलीको अवसरमा टेलिकमको छुटैछुट
काठमाडौं, फागुन १६ – होलीको अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई छुट दिने भएको छ ।
फेसबुक नै बुढेसकालको सहारा !
काठमाडौं, फागुन १० – सबैलाई आफ्नो बुढेसकाल कसरी बिताउने भन्ने चिन्ताले सताएको हुन्छ । पछि गएर दुःख पाउँछु कि भन्ने पीरले सबैले पहिले नै जोहो गर्ने गर्दछन् ।
​खगोल भौतिक विज्ञानको अनुसन्धानमा सहभागी हुन आवेदन खुल्ला
फागुन ७ – खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिक विज्ञान अनुसन्धान सम्बन्धी एक दिने कार्यशाला गोष्ठी हुने भएको छ ।